'व्यवसायी र मजदुरबिच नङ र मासुको सम्बन्ध स्थापीत गर्न मेरो नेतृत्व प्रतिवद्ध छ' : नवराज दाहाल - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘व्यवसायी र मजदुरबिच नङ र मासुको सम्बन्ध स्थापीत गर्न मेरो नेतृत्व प्रतिवद्ध छ’ : नवराज दाहाल
Posted by Headline Nepal | १९ कार्तिक २०७४, आईतवार १७:४८ |
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले भर्खरै मात्र नवराज दाहाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति पाएको छ । विगतको नेतृत्वमा टानभित्र विभिन्न किसिमका मनमुटाव, वैमनश्यता जस्ता समस्याहरु देखा परेका थिए । अबको नेतृत्वले यो समस्याको सामाधान कसरी गर्छ, मजदुर र व्यवसायीबिचको सुमधुर सम्बन्ध कसरी कायम गर्छ भन्ने जस्ता समसामयिक विषयमा रहेर हेडलाईन नेपालले टानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवराज दाहालसँग कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ हेडलाईन नेपाल र टानका अध्यक्ष नवराज दाहालबिच भएको कुराकानी
टानको निर्वाचनले नेतृत्वको जिम्मा तपाईंलाई दिएको छ, टानलाई माथि उठाउनका लागि तपाईंको पहिलो काम के हुने छ ?
सबै ट्रेकिङ व्यवससायीहरुले मलाई साथ दिनुभएको छ, निर्वाचित गराईदिनुभएको छ । सबै ट्रेकिङ व्यवसायीहरुलाई हेडलाईन नेपाल डक कममार्फत धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । टानलाई साँच्चैको टान बनाउने प्रतिबद्धताको साथ म अघि बढेको छु । हाम्रो पदयात्रा व्यवसाय दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गईरहेको छ, विभिन्न समस्याहरु आईरहेका छन् । पछिल्लो समय यो पदयात्रा गैरकानुनी ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आईरहेको छ । पर्यटकहरु आफुखुसी ट्रेकिङमा जाने , गाईड नलाने, क्रियाकलापहरु भएको हुनाले एकातिर रोजगारी पनि वृद्धि नहुने, मजदुरहरुलाई सोचेको जस्तो सुविधा दिन नसकिने, पर्यटकहरु पनि सुरक्षित नहुने, र व्यवसायीहरुको व्यवसाय घट्ने यो अवस्था छ । यो अवस्थामा मेरो नेतृत्वले गैरकानुनी ढङ्गबाट सञ्चालित क्रियाकलाप पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि ट्रेकिङ जाँदा एक जना गाईड लिएर नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त कम्पनीबाट जाने नियम बनाउनको लागि हामीले पहल गर्ने छौं । । यो नै मेरो नेतृत्वको मुख्य काम हो । जब यो व्यवसायलाई सबैलाई कानुनीदायरामा ल्याएर वैधानिक ढङ्गले पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकियो भने, पर्यटकहरुले पनि आफ्नो पदयात्रा सुरक्षित ढङ्गले गर्न सक्छन् । व्यवसायीहरुको व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । मजदुरहरुको रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ र सेवा सुविधामा पनि वृद्धि हुन्छ । राज्यले पनि आयकर, भ्याट मार्फत आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्छ । यो सबैको हितमा हुने र नेपालको पदयात्रा पूर्ण रुपले सुरक्षित छ भनेर बाहिर पनि सकारात्मक सन्देश जाने हुनाले यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि उठाउनुभएको यो महत्वपूर्ण मुद्धा छ । यो व्यवसायीहरुको साथ मलाई हुनेछ । यो सिङ्गो कार्यसमितिका साथीहरुले पनि मलाई साथ दिनुभएको छ । र राज्यले पनि साथ दिनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिगेका छौं ।
टानमा निर्वाचित भएर आईसकेपछि, निर्वाचन हुनुपूर्व रहेका असन्तुष्ट समुहलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ?
निर्वाचनमा दुई वा तीन समुह भएर प्रतिष्पर्धा गर्नु एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । मेरो प्रतिपक्षी जो मोहन जी र उनले नेतृत्व गरेको समुहसँग हामी चुनावको दौडानमा पनि त्यस्तो वैमनस्यता, एकले अर्कालाई आलोचना गर्ने, आक्षेप लगाउने कार्यहरु हामीले गरेनौं । हामी सबै एउटै पदयात्रा व्यवसायमा छौं । लामो समयसम्म हामी दुवै पक्ष वा त्रिपक्षिय साथीहरु, जोजो चुनावी प्रतिष्पर्धामा आउनुभयो, सबै पदयात्रा व्यवसायी लामो अनुभव संगालेका, सक्षम, बौद्धिक साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । व्यवसायीहरुले मलाई निर्वाचन गर्नुभएको छ । निर्वाचन पछाडि हामी एउटै समुह भएको मैले ती साथीहरु, जोजो मसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुभयो उहाँहरुलाइ जानकारी गराईसकेको छु । हामी एकसाथ, एकढिक्का भएर काम गर्नुपर्छ र मलाई तपाईंहरुको जरुरी पर्छ, आवस्यक पर्छ भनेर उहाँहरुलाई भनिसकेको छु । उहाँहरुले पनि मलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसक्नुभएको छ । अहिले जोजो साथीहर निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, सबैसाथीहरु मेरा साथीहरु हुन् । हामी एउटै प्रकृतिका मुद्धाहरुमा केन्द्रित हुनेपर्ने भएको हुनाले, उहाँहरु पनि मजत्तिकै सक्षम भएको हुनाले, र हामीले यो दुई वर्षिय कार्यकालमा एकअर्कामा द्वन्द गर्नुपर्ने आवस्यकता हुँदैन, हामी गर्दैनौं, म गर्दिन ।
निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र रिजालको पालामा नेपाल टुरीजम बोर्डबाट केही बजेटको योजनाहरु आउने कुराहरु थिए, त्यो काम अझै बाँकि छ । त्यसको लागि पहल कसरी गर्नुहुन्छ ?
टुरिजमबाट टानलाई आउनुपर्ने रकम त्यो चन्द्र जीको कार्यकालभन्दा अघिल्लो कार्यकालबाट विवादित भएका हुन् । टिनस् मार्फत टानलाई जानुपर्ने जुन रकम थियो त्यो सहि ढङ्गले सदुपयोग भएन । तोकिएको शीर्षकभन्दा बाहिरबाट खर्च भयो भन्ने टुरिजम बोर्डले आशंका गर्यो । त्यहि अनुरुप चन्द्र जीले नेतृत्व गर्दा पनि त्यो देखियो । बोर्डले त्यति सहयोग गरेको देखिएन । अब म आईसकेपछि, टुरिजम बोर्डका सबै साथीहरुसँग छलफल गर्छु । समस्या के हो हामीलाई आशंका नगर्नुस् । हामी तोकिएकै शीर्षकमा रकम खर्च गछौंं । अत्यन्तै पारदर्शीता अपनाउनेछौं । नयाँ नेतृत्वलाई उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु ।
“मजदुरका सकारात्मक तथा पपुरा गर्न सक्ने मागहरु हामी पुरा गछौं । व्यवसायी र मजदुरबिच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यो स्थापीत गर्न टान पुरै लाग्नेछ “
पदयात्रामा रहेका मजदुरहरुलाई विभिन्न समस्या आईपरेका छन् भन्ने छ, यसलाई न्यनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?
टानको उनन्चालिसौं वार्षिक साधारणसभा र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने चुनावी बैठकमा पनि मैले यो कुरा भन्द्रै आएको छु । टान र मजुदुरको विषेश गरेर सिजनको बेलामा द्वन्दहरु आउने, मजदुरहरुले पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाईको र तलवभत्ता वृद्धि नभएको भन्ने कुराहरु राखीरहेका छन् । यसलाई अलि व्यवहारीक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुले पनि अराजक ढङ्गले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । यो पनि गैरकानुनी ढङ्गले अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यसै कारण मजदुरहरुले मागेको जति सेवासुविधा दिन नसक्ने समस्या छ । अर्को भनेको मजदुरहरुले पनि अराजक ढङ्गले मागहरु राखिरहेके अवस्था छ । जति आफुले पाउनुपर्ने हो त्यो भन्दा अलि बढि मागहरु प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । यसकारण पनि द्वन्द सिर्जना हुन्छ । यसमा व्यवसायीहरुले पनि ध्यान दिनुपर्छ र मजदुरहरुले पनि आवस्यकताभन्दा बढि माग प्रस्तुत गरेर बखेडा निकाल्नुहुन्न । मलाई विश्वास छ, मजदुरका सकारात्मक तथा पपुरा गर्न सक्ने मागहरु हामी पुरा गछौं । व्यवसायी र मजदुरबिच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यो स्थापपीत गर्न टान पुरै लाग्नेछ । अनि अर्को कुरा रेस्क्यु र ईन्सुरेन्सको जिम्मा पनि अब टानले लिनुपर्छ । त्यो पनि ट्रेकिङ कम्पनीहरुको सहमतीमा लिनुपर्छ । अर्को मजदुरको वेलफेयरको कुरा पनि हामीले सोचिरहेका छौं । सम्भवतः आउने केही महिनाभित्रमा नै मजदुरहरुको अधिकांश मागहरु पुरा हुनेछ । आगामी दिनमा व्यवसायी र मजदुरबिच द्वन्द्ध हुनेछैन ।
विगतदेखि नै पदयात्राका क्रममा दुर्घटनाहरु हुँदे आएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न र नयाँ पदयात्राहरु खोजि गर्न तपाईंको भुमीका के रहन्छ ?
जतिपनि दुर्घटनाहरु भएको छ, ति पर्यटकहरु आफैं पदयात्रामा गएको कारण यो भएको हो । आफैं जानुभन्दा पनि कम्तिमा एक जना गाईड लिएर जाने बातावरण बनाउन पर्छ, त्यसलाई हामीले प्रयास गर्छौं । पदयात्राको सम्भावना रहेको आकर्षक रुटहरु पनि हामी खोजिरहेका छौं । मेरो नेतृत्वले यस विषयमा प्रतिवद्धता राखिसकेको छ ।
Previousपहिलो चरण चुनाव : प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाई सकियो
Nextसाउदी युवराजको कदमः भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही कि विरोधी सिध्याउने खेल ?
‘अब स्वदेशमै रोजगार दिएर देशलाई आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ’ : रायमाझी
२१ श्रावण २०७४, शनिबार १४:३७
अन्र्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनका सहभागीहरुलाई सम्मान
४ कार्तिक २०७३, बिहीबार १९:१८
‘भोजभतेरले मतको दुरुपयोग नहोस्’ : प्रमुख निर्वाचन अायुक्त यादव
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार १८:०४